Nezvedu - HEYPACK CO., LIMITED
Isu tiri nyanzvi yekugadzira cosmetic packaging.
Chikwata chekugadzira dhizaini uye boka rehunyanzvi rekutengesa kuYiwu Zhejiang.
Isu tinoshuvira kuve mutengesi wepasi rose wepasuru yemidziyo, uye nekupa sevhisi ye10000 mhando pasi rese.Tine yakasimba uye yakazvimirira chigadzirwa dhizaini, zvigadzirwa zvekuvandudza zvikwata.
Isu tinotora marudzi ese emabasa, anonamatira kuhope dzedu.
Isu tiri bhizinesi rakazvimiririra rinotarisa mukugadzira uye kutengesa kwese marudzi epakeji uye midziyo.Kwemakore gumi nemashanu apfuura, takapa sevhisi yepasuru kune mamwe mabhizinesi akawanda.Isu takatsaurirwa kuvandudzwa kwedanho rekugadzira rebhizinesi redu.
Zvinodiwa zvinogadzirisa zvese.Zvikwata zvinohwina ramangwana.Kuva nyanzvi, kuva akatendeseka, kugadzira, uye kuva anogoveranwa ndizvo zvatinotenda.
Kuve mubatsiri wekutenga wevatengi uye kupa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro zvinhu zvinofadza kwatiri.
HEYPACK tanga zvizorwa kurongedza kutengeserana kunze kwenyika muna 2009. Kusvika ikozvino HEYPACK ine yakazara kugadzira uye kutumira system.Plastiki & simbi & bepa & bamboo zvinhu muunganidzwa, bhodhoro kuvhuvhuta & jekiseni, kuraswa pamusoro senge electroplating, frosting, engraving, spraying.Kudhinda kwelogo senge skrini, offset, kupisa stamping, kutamisa mvura, kunyora.Kunze kwezvo, sampuro yemahara, DDU yegungwa kutumira, inodhura-inoshanda mhepo kutumira.Chinangwa chedu chekupedzisira kuve wako wakavimbika bhizinesi shamwari!
Zvigadzirwa zvedu zvikuru ndezvekuzora PE machubhu, aluminium-plastic laminated chubhu, PE & PET mabhodhoro anofuridza, bhodhoro risina mweya & zvirongo zvekirimu, magirazi & mabhodhoro ealuminium, make-up uye pefiyumu packing.
Isu tanga tichipa yakakwirira-inoshanda customized mudziyo.
Isu tiri nyanzvi yekutenga mubatsiri wevatengi.
- Iri ibasa rine pfungwa yekubudirira.
Tiri kutarisira kushanda newe nemoyo wese.